လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအား စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း | FLEGT
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် (VPA) ရယူထားသည့်မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ အာဏာပိုင်များသည် FLEGT လိုင်စင်ကို မထုတ်ပေးမီ သစ်ထုတ်ကုန်သည် တရားဝင်ဖြစ်နေစေရန် သေချာစေရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ VPA တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါ လိုအပ်ချက်များအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ သို့မဟုတ် မည်သူမဆို ဥပဒေအရလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်း ဆက်ထိန်းချုပ်မှုများက လိုင်စင်ရရှိထား သည့် ထုတ်ကုန်များသည် တရားဝင်ဇစ်မြစ်မှသာလာကြောင်း သေချာစွာလေ့လာစီစစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
VPA သည် လိုက်နာမှုမရှိခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပေးသည့် ဥပဒေသက်ရောက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်မည့်အတိုင်းအတာများအတွက် မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ မည်သို့ ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဆိုသည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအများလက်ခံစေရန် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းသည် သစ်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်နေ သော လုပ်ငန်းများသည် VPA သစ်တရားဝင်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် လိုအပ်ချက် များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဆိုသည့် တိကျပြတ်သား သောအထောက်အထားများလိုအပ်ပါသည်။
သက်သေများကို ကုန်ပစ္စည်းအားစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များနှင့်၊သို့မဟုတ် စနစ်တကျစုဆောင်းထားသော ဒေတာများနှင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တလျှောက် မတူညီသော စစ်ဆေးထားချက်အဆင့်များမှ စုဆောင်းသည်။
စာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သက်သေစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အရာရှိများအား သင်္ဘောဖြင့်တင်ပို့ရန် တရား၀င်ဖြစ်မဖြစ်ကို FLEGT လိုင်စင်မထုတ်ပေးမီ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
တရားဝင်ဖြစ်ခြင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုမည့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် အစိုးရအေဂျင်စီများ၊ ဈေးကွက်အတွင်း ပါဝင်သည့်သူများ၊ တတိယအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အားလုံးပေါင်းစည်းထားသည့် အဖွဲ့များပါဝင်တတ်သည်။ စစ်ဆေးအတည်ပြုရာတွင်ပါဝင်သော အဖွဲ့အားလုံး၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သတ်မှတ်ထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း အသက်ဝင် လာသည် နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း လွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်သည် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို အချိန်မှန် စစ်ဆေး ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းများ ပြုစုရမည်ဖြစ်ပြီး အစီရင်ခံစာတွင်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း၏ ထိ ရောက်မှုများနှင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အားနည်းချက်များ ပါဝင်သည်။
ယနေ့အထိ VPAs လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် အစိုးရအဖွဲ့များသည် စစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အချို့သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ဤအလုပ်အားကူညီရန် ခန့်ထား သို့မဟုတ် ငှားထားကြသည်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Conformity Assessement Bodies (CABs) ကို ခန့်အပ်ပြီး တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက်အပေါ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်အစိုးရဆိုင်ရာ လေးစားလိုက်နာမှုကို စစ်ဆေးအတည်ပြုစေပါသည်။ CABs သည် အင်ဒိုနီးရှား၏ National Accreditation Body မှ အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ISO/IEC 17065 စည်းမျဉ်းအရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည်။ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့် စနစ်၏ လိုင်စင်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ယေဘုယျ ကြီးကြပ်ခြင်းသည် အစိုးရ၏တာဝန်သာဖြစ် သည်။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်အကဲဖြတ်သည့်စံများနှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
EU. 2007. FLEGT Briefing Note 05: Legality assurance systems: requirements for verification. European Union. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]